» ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–५ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–५ (भिडियो)
२६ आश्विन २०७६, आईतवार १५:४७
मकवानपुर, २६ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको पाँचौँ भागमा हामीले ब्याटल राउण्डको पाँचौ एपिसोडमा कसले कस्तो गाए ? अनि को बाहिरिए र को सेलेक्ट भए ? यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
शुक्रबार भएको पहिलो ब्याटल टिम राजुको समूहबाट भएको थियो । जसमा सनिश श्रेष्ठ र सशिका सुनारले साँगितिक ब्याटल भिडेका थिए । ‘मिठो तिम्रो मुस्कानमा’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका सनिश र सशिकामध्ये सनिशले नकआउटका लागि बाजी मारे । निकै सुरिलो स्वरकी धनी सशिकालाई पनि कोच आस्थाले आफ्नो स्टील पावरको प्रयोग गर्दै सेभ गरिन् । यससँगै सशिका पनि नकआउटमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनी अब कोच राजुको टिमबाट कोच आस्थाको टिममा पुगेकी छिन् । कोच प्रमोदपछि आस्थाले आफ्नो स्टील पावर प्रयोग गरेकी हुन् । ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल सनिश र उत्तिकै मिठो आवाज भएकी सशिकाको ब्याटल निकै नै दमदार थियो । त्यस्तै दोस्रो ब्याटलमा टिम दिपबाट अंकित बस्नेत र सुनिल लोहला श्रेष्ठ भिडेका थिए । उनीहरुले ‘भन के छ बन्दोबस्त’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निकै नै रोमाञ्चक प्रस्तुति दिएका अंकित र सुनिल मध्ये अंकितले नकआउट राउण्डका लागि बाजी मारे । ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल सुनिल नकआउटमा पुग्न सकेनन् ।
त्यस्तै तेस्रो ब्याटलमा टिम आस्थाबाट एजेश पौडेल र राजिव सोनार भिडेका थिए । उनीहरुले ‘विरताको चिनो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यस ब्याटलबाट राजिव नकआउटका लागि सेलेक्ट भए । मिठो स्वरका धनी एजेशले अर्को सिजनमा समेत फेरि आउने अपेक्षा लिएका छन् । शुक्रबारको एपिसोडको अन्तिम ब्याटलमा टिम प्रमोदबाट प्रवेश खतिवडा र विमोचना लोम्जेलले प्रतिस्पर्धा गरे । ‘मखमली पछ्यौरीले सानु’ बोलको गीतमा भएको यो प्रतिस्पर्धाबाट विमोचना लोम्जेल नकआउटका लागि छानिए । भर्सटाईल सिंगरका रुपमा चिनिएका प्रवेश ब्याटलबाट बाहिरिए । विमोचना र प्रवेशको स्वरको मिठास तारिफयोग्य भएको सबैले आभास गरे । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।